Oge Igwe Ọdụdọ Social na Green Mpaghara na Izmir | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Aegean35 IzmirOge Nlekọta Anya Ọha na Agba na Mpaghara Green na Izmir
21 / 05 / 2020 35 Izmir, Mpaghara Aegean, General, Isi akụkọ, Turkey
Oge okirikiri ebe na-acha uhie uhie na mpaghara Izmir
Obodo Izmir dị na Kordonboyu, nke puku kwuru puku ndị mmadụ na-agarị n'ihu, ma n'oge anwụ. Ndị bi na Izmir nwere afọ ojuju maka ngwa a.
Coronavirus jikoro imehie na iwu nke ịtọpụ usoro iwu Izmir Obodo ukwu gbaburu akara ọzọ na Turkey. Obodo Obodo bidoro omume mmegharị mmekọrịta na Kordon, nke bụ ebe amaara ndị Izmir ebe niile. Yabụ, a ga-agba mbọ hụ na ụmụ amaala na-agbaso iwu anya maka mmekọrịta ọhaneze ebe ha zuru ike.
Ogige Ntụrụndụ Izmir na Obodo Ugbo na Ubi Ugbo na-adọta 6 mita na dayameta na etiti mita 2,5 na Kordon, nke nwere mpaghara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ 4 nke egwuregwu bọọlụ. Ka ị na-adọta hops, a na-eji resin mmiri, nke na-anaghị emebi ahihia. A na-eme atụmatụ idozi ahihia ndị ahụ ka ahịhịa na-eto.
Obi dị ndị bi na Izmir ụtọ ihi ụra
Ndị Izmirians nwere afọ ojuju maka ngwa a. N'ikwu na ya hụrụ etu ihe a siri chọọ, Ramazan Demir kwuru, sị, “Ọnọdụ mmekọrịta dị ezigbo mkpa maka ahụike anyị na ndị nọ anyị nso. Obodo Izmir nke Obodo metụrụla etu a. Ọ dị ezigbo mkpa ka ndị anyị rubere ya isi. ” Gül Berber kwuru na ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịnọdụ ala n'ụsọ mmiri mgbe ị na-elekọta mmadụ, Yusuf Süleymanoğlu kwuru na ekwesịrị ịkwado ma gbasaa omume ofzmir Obodo a.
Mgbe Ngwa Kordon gasịrị Karşıyaka ala mmiri, Bayraklı osimiri, Buca Hasanağa Garden, Bornova Aşık Veysel Mpaghara ntụrụndụ ga-aga n'ihu na mpaghara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ebe dị iche iche nke obodo ahụ.
“Are nọ na gburugburu”
Onye isi obodo ukwu Izmir nke obodo Tunyer Soyer kwupụtara ngwa ahụ na akaụntụ mgbasa ozi ọhaneze dịka nke a: “outside nọ n'èzí ka ị ga - anọ na gburugburu”. N'ezie Murathan Mungan edeghị okwu ndị a site na iche echiche banyere ụbọchị anyị biri. Mana dị ka "ọhụụ nke ndụ ọhụụ" dị na ndụ, na Izmir's Kordonboyu, Karşıyaka Nọgide n'anyịnya na-ahụkarị ebe ahụ. ”
Ngwurugwu Green dị nro maka tram na Izmir
Ngwa oche oche Green bidoro na Ọdụ Ọha na Izmir
Karşıyaka oke osimiri
Ngwaọrụ logistics na njem
Oge Azụmaahịa Ekwentị Amalite na İzmir